Xiriirada iyo macluumaad la xiriira waa mid aad muhiim u ah wax kasta oo user sida ay asal ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro dadka ku ah waxaa lagu yaqaan oo. Sidoo kale waa xaqiiqda dhalashada in laga badiyay macluumaadka xiriirka waa wax loo arkaa khasaaro ah loo dulqaadan karin oo sabab la mid ah farsamooyinka kala duwan ayaa la soo saaray arrintan la xiriira in la hubiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin ah. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan wareejinta xiriirrada iyo faahfaahinta la xidhiidha in computer si loo hubiyo in aan kaliya gurmad ah loo abuuray, laakiin waxay ku sii amaan iyo sidoo kale.
Qeybta 1: Isticmaalka SIM iyo Lugood
Qeybta 2: Isticmaal app ee bilaashka ah My Xiriirada kaabta
Qeybta 3: Isticmaalka iCloud iyo Gmail
Qeybta 4: Isticmaalka Wondershare TunesGo Retro
Qeybta 5: My Ujeedadu waa in si dhabarka ka kooban xiriirada iPhone aan, iyadoo la doorbidayo in liiska daabacan
Waa habka ah in la si weyn loo isticmaali karaa iyada oo aan arin kasta oo si phone ma1.The waa in lagugu xiro hubiyo in PC.ke in gurmad ah ee xiriirada la abuuray on PC ama Mac. Barnaamijyada software macruufka horay arrintan la xiriira siiyaan gacan iyo wax aan waxba ahayn isla sabab cusub waxaa looga baahan yahay. Si loo gaaro bartilmaameedka hab fudud users ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo in hab in uu halkan ku xusan waxaa la socda talaabo talaabo ah in ay ka fogaadaan wax kasta oo wareer iyo arrinta.
3.Once barnaamijka software-ka ayaa laga bilaabey telefoonka waa in la ku yaalla adiga oo riixaya icon ku habboon.
4.After helaan goobaha of iPhone tab ama doorasho ah "Mail, Xiriirada iyo Calendar" waa in la daah furo.
Doorasho 5.The oo ka mid ah xiriirada SIM-dejinta waa in markaas la soo saaro.
6.The info icon waa in ay u bilowdo menu halkaas oo xiriir ah syncing doorasho waxaa laga heli karaa la taabtay Lugood ah.
7.On shaashadda soo socda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in "buuga Cinwaanka nidaameed iyo Xiriirada" la doorto iyo badhanka u hagaagsan la isku soo riixayo hoose ee shaashadda si ay u dhamayso.
Isticmaalka codsigan uu yahay mid aad u fudud oo aan sidaa users ayaa had iyo jeer lagu qiimeeyo waxay sare sida qasabadaha yar oo keliya ayaa la heli karaa si ay u hubiyaan in gurmad xiriir la abuuray markii waynay oo dhan. Ka dib markii qaar ka mid ah tallaabooyinka ku lug leh si loo hubiyo in processing siman shaqada arrintan la xiriira.
Codsiga 1. lagala soo bixi karaa URL https://itunes.apple.com/us/app/my-contacts-backup/id446784593?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 iyo tilmaamaha waa in la raaco si loo soo dajiyo waxaa. Marka waxa la sameeyo codsiga waa in la daah furo si loo hubiyo in interface ugu weyn ee u muuqataa.
2.Now user ay u baahan tahay inay hesho button gurmad ah si loo hubiyo in bilowday geeddi-socodka iyo ka dibna user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in tilmaamaha ayaa sidoo kale raacay.
Codsiga 3.Beerta lifaaq xiriir ee foomka of vcard iyo hubsato in adeegga default email loo isticmaalo iyo sidoo kale weydiin doonaa cinwaanka email halkaas oo xiriir ah waa in loo soo diro ka dhigi doonaa. Marka jaraa'id user u dhammeeyey xiriir ah waxaa loo wareejin doonaa cinwaanka email iyo habka ka baxayo.
Tani habka xidhiidhka gurmad sidoo kale waa mid fudud in la isticmaalo. Ka dib markii ay talaabooyin ku xusan hoos ku qoran si la mid ah sida saxda ah ku filnaan doonto u user mar ma gudahood oo dhan.
1. iCloud tab waa in la daah furo ka dib markii saldhigyo iPhone waxaa lagu heli.
2.Against tab xiriirrada user u baahan yahay inuu ka soo leexdo badhanka on hormariyo midowdo shaashadda soo socda.
3.Now user ay u baahan tahay in aad soo booqato website-ka www.icloud.com iyo login la faahfaahinta.
4.The xiriirada icon waa in la soo saaro shaashada ku xigta.
5.The cog icon waa in la daah furo oo ka menu ka dhashay doorasho ee kaarka dhoofinta V waa in la soo xulay.
6.This file vCard badbaadi doonaa in kombiyuutarka.
7.The hoos u arrow ka dhanka ah Gmail icon mar guji heli doonaa user ay u menu ka halkaas oo doorasho ee xiriirada waa in la riixi.
File vCard 8.The oo uu soo badbaadiyey hore ee nidaamka la keeno karaa iyadoo la isticmaalayo suuqa kala socda.
Xiriirada 9.The iPhone waxaa laga arki karaa in Gmail sida soo socota.
Barnaamijka software 1. lagala soo bixi karaa iyo lagu rakibay ka URL http://www.wondershare.com/mac-ios-manager/ oo marka si guul leh ayaa lagu rakibay la waa in la bilaabay.
2.On dhankiisii ​​bidix iyo user wuxuu u baahan yahay in guji xiriiro si loo hubiyo in hannaanka uu aado dhinaca saxda ah.
Software 3.Beerta iskaan doono qalabka wax soo xiriiro oo uu muujin doonaa natiijada.
4.On dhinaca kore ee midig arimo la nuqul in Lugood oo ay tahay in la riixi.
5.All xiriir ah ayaa la koobiyeyn doonaa in software Lugood ee Apple Inc. ka halkaas oo user inay hubiyaan in xiriir kuwan waxaa synced in computer si dhan files vCard aadna ku badbaaddeen gal nidaamka iyo gurmad loo abuuray si toos ah u dhigi kara.
Qeybta 5: My Ujeedadu waa in si dib ka soo xidhiidho iPhone aan, iyadoo la doorbidayo in liiska daabacan
The My Xiriirada app ee kaabta dib loo eegay si faahfaahsan weyn ee tutorial iyo waxa ay leedahay mid ka mid ah qaababka looga cabsado ee lagu badbaadinayo xiriirada ee foomka of file vCard taas oo markaas loo isticmaali karaa in daabacan xiriir hab sahlan. The hardware dheeraad ah oo kaliya in ay tahay in lagu lifaaqo arrintan la xiriira waa printer ah oo loo isticmaalo in ay curiyaan nuqulada adag oo ka mid ah xiriirada in uu badbaadeen qaab faylasha vCard. Habka daabacaadda waa cadaalad ah oo fudud oo ah ka dib markii ay file vCard user xaqa u baahan yahay in wax miiran Ctrl + P in la furo suuqa kala print ka dibna dooro print si loo hubiyo in u-ekaanta adag waxaa la abuuray iyaga oo aan wax dhibaato ah ka.
> Resource > iPhone > 5 siyaabo oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in computer